Ch 2 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 2 Matthew
2:1 Ary noho izany, rehefa teraka Jesosy tao Betlehema an'i Joda, tamin'ny andron'i Heroda mpanjaka, indro, Magy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema,
2:2 nanao hoe:: "Aiza Ilay teraka ho Mpanjakan'ny Jiosy? Fa efa nahita ny kintany teny atsinanana, ary efa tonga mankafy azy. "
2:3 Ary Heroda mpanjaka, nandre izany, i tsaina, ary mbamin'i Jerosalema rehetra.
2:4 Ary novoriny avokoa ny mpitarika ny mpisorona, ary ny mpanora-dalàna ny olona, dia niara-nihevitra azy araka ny any amin'ny itoeran'i Kristy fa ho teraka.
2:5 Ary hoy izy ireo taminy: "Ao Betlehema an'i Jodia. Fa izao izany dia efa voasoratry ny mpaminany:
2:6 'Ary ianao, Betlehema, ny tanin'ny Joda, dia tsy mety kely indrindra ao amin'ny mpitarika ny Joda. Fa avy aminao no hivoahan'ny mpitondra izay hitari-dalana ny Isiraely oloko. ' "
2:7 Ary Heroda, mangina miantso ny Magy, tsara nianatra taminy ny fotoana nisehoan'ilay kintana ho azy ireo.
2:8 Ary naniraka azy ho any Betlehema, hoy izy:: "Mandehana, ka mazoto manontany fanontaniana momba ny zaza. Ary rehefa nahita azy ianao, tatitra ho ahy, ka dia I, koa, hiditra ka mankafy azy. "
2:9 Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka, dia lasa nandeha. Ary indro, ny kintana izay efa hitany teny atsinanana nialoha azy ireo, na dia mandra-, tonga, dia nijanona ambonin'ny toerana nisy ny zaza.
2:10 Avy eo, nahita ny kintana, faly izy ireo noho ny tena fifaliana lehibe.
2:11 Ary raha niditra ny trano, dia nahita ny zaza amin'ny reniny Mary. Ary noho izany, lavo niankohoka, dia niankohoka izy. Dia manokatra ny harena, Dia notolorany fanomezana: volamena, ditin-kazo manitra, ary miora.
2:12 Ary rehefa nahazo valiny amin'ny torimaso fa izy ireo tsy hiverina any amin'i Heroda, dia niverina tamin'ny fomba hafa ny faritra.
2:13 Ary rehefa efa lasa, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho tamin'i Joseph amin'ny torimaso, nanao hoe:: "Mitsangàna, ary alao ny zaza sy ny reniny, dia mandosira any Egypta. Ary hitoetra any ambara-pilazako aminao. Fa izany no hitranga fa Heroda efa hitady ny zazalahy mba hamonoany azy. "
2:14 Ary nifoha, dia naka ny zaza sy ny reniny, raha mbola alina, dia niala teo ho any Egypta.
2:15 Ary dia nitoetra tao, ambara-pahafatin'i Heroda, mba hahatanteraka izay nolazaina tamin'ny alalan'ny ny Tompo ny mpaminany, nanao hoe:: "Hiala tany Egypta, Nantsoiko ny zanako. "
2:16 Ary Heroda, nahita fa efa voafitaky ny Magy, Dia tezitra indrindra. Ary noho izany dia naniraka ny hamono ny zazalahy rehetra izay tao Betlehema, ary tamin'ny tany rehetra ny fari-taniny, hatramin'ny roa taona no ho midina, araka ny andro izay efa nianatra ny manontany ny Magy.
2:17 Ary izay nolazaina tamin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia tanteraka, nanao hoe::
2:18 "Nisy feo efa re tao Rama, nitomany sy ninaonaona be: Rahely nitomany ny zanany. Nefa tsy mbola vonona ny ho nampionona, satria intsony. "
2:19 Avy eo, rehefa Heroda efa lasana, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho amin'ny torimaso Josefa tany Egypta,
2:20 nanao hoe:: "Mitsangàna, ary alao ny zaza sy ny reniny, dia mankanesa any amin'ny tanin'ny Isiraely. Ho an'ireo izay nitady ny ain'ny zaza efa lasa. "
2:21 Ary nitsangana, dia naka ny zaza sy ny reniny, Ary nandeha ho any amin'ny tanin'ny Isiraely.
2:22 Avy eo, nandre fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodia nandimby an'i Heroda rainy, dia natahotra hankany izy. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny torimaso, dia lasa nankany Galilia faritra.
2:23 ary tonga, dia nitoetra tao an-tanàna atao hoe Nazareta izay, mba hahatanteraka izay nolazaina tamin'ny alalan'ny mpaminany: "Fa ho hoe Nazarena Izy."